Tonia mpampanoa lalàna Balisama Razafintsoa : Tsy nitsoaka i Claudine Razaimamonjy -
AccueilRaharaham-pirenenaTonia mpampanoa lalàna Balisama Razafintsoa : Tsy nitsoaka i Claudine Razaimamonjy
12/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Namaly avy hatrany ny sendikan’ny mpitsara omaly maraina ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany Balisama Razafintsoa, manoloana ny filazan’izy ireo fa nisy ny firaisana tsikombakomba tamin’ny fandefasana azy hitsabo tena any amin’ny nosy Maorisy. Nambaran’ny tonia mpampanoa lalàna àry fa nisy ny taratasy mazava na ilay antsoina hoe “Certificat Medical’’manambara fa mila mitsabo tena any ivelany i Razaimamonjy Claudine. Io taratasy io izay nahitana ny sonian’ny mpitsabo eo anivon’ny fonja sy ny avy amin’ny minisiteran ny Fahasalamam-bahoaka. Noho izany dia nanamarika ny tonia mpampanoa lalàna fa raha mazava ny taratasy , indrindra voalaza mazava ao fa atahorana mety hitarika hatramin’ny fahafatesana ny aretina mahazo ilay marary dia tsy maintsy raisina ny andraikitra . Araka izany dia nandray ilay fanapahan-kevitra ny fitsarana fa ho soniavina ny taratasy fahazoany mitsabo tena any ivelany, izany hoe ‘‘sans objection’’ ny fitsarana raha ny fanazavana azy ara-teknika .
Asesiky ny sendikan’ny mpitsara hatrany kosa anefa fa nisy ny fitsoahana ny fonja , raha ny fahitan’izy ireo ny zava-misy aorian’ny fanadihadiana voalaza fa natao. Manamarika anefa ny tonia mpampanoa lalàna ambaratonga voalohany fa efa noraisina ny fepetra rehetra manoloana ity fitsaboana nataon’i Razaimamonjy Claudine atsy Maorisy ity. Porofon’izany ny fisian’ny mpitsabo nahazo taratasy manokana avy amin’ny fitsarana manaraka azy any , eo ihany koa ny mpiambina fonja iray izay manara-maso ny fiambenana atao mandritra ny fitsaboana.
Tsy tokony hisy intsony ny resa-be izay iniana volena ampisavorovoroana saim-bahoaka. I Madagasikara rahateo hoy ny tonia mpampanoa lalàna dia mpikambana feno ao amin’ny comesa ka azo atao tsara ny mifampiraharaha eo amin’ny lafin’ny lalàna . Nitsikafona hatreo ihany koa ny lainga sy fampisafotofotoana saim-bahoaka izay nataon’ny sendikan’ny mpitsara, taorian’ny fanazavana mazava nataon’ny Tonia mpampanoa lalàna iny.
Maurice Tsiavonana : Nitondra fanazavana mahakasika ny fanaratsiana azy